Daawo:- Wararkii ugu dambeeyay Banaanbaxa Kismaayo + Ujeedka banaanbaxa oo weji kale yeeshay. – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeFaalloyinkaDaawo:- Wararkii ugu dambeeyay Banaanbaxa Kismaayo + Ujeedka banaanbaxa oo weji kale yeeshay.
August 31, 2019 marqaan Faalloyinka, Maqal Iyo Muuqaal, Soomaliya, Wararka maanta 1
Banaanbax balaaran oo aan horay loo arag ayaa maanta gilgilay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose.
Banaanbaxa oo ahaa mid kadhan ah Dowladda somalia ayaa waxaa kaqayb galay boqolaal dad ah oo watay boorar ay kuqoran yihiin erayo katarjumaya dareenkooda.
Halkaan hoose kadaawo muuqaalka
Kismaayo oo looga dhawaaqi doono in ay ka Go’day Somaliya halkaas oo ay kenya ictiraafi doonto, ISAAQU run bay u maleyn doonaan hadalka aan soo qorey kkkkkkkkkkk.